अबको नयाँ सरकारले पाउने छ यस्तो जस, के के छन् सकिनै लागेका विकास आयोजना ? – Medianp
अबको नयाँ सरकारले पाउने छ यस्तो जस, के के छन् सकिनै लागेका विकास आयोजना ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, पुष २४, २०७४१५:२०
काठमाडौं, २४ पुस । करिब दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको वाम गठबन्धनले अबको पाँच वर्ष मुलुकमा स्थिर सरकार देला कि नदेला ? भन्ने प्रश्न सबैमा उब्जेको छ । पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन सक्यो र कुनै गडबड गरेन भने कम्युनिस्ट गठबन्धनले ठूलो जस पाउने अवस्था छ ।
आगामी पाँच वर्ष मुलुकका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । विकास निर्माणका लागि विगत २० वर्षयता भएका ठूला लगानीहरूले प्रतिफल दिन थाल्ने समय हो अबको पाँच वर्ष । अबको डेढ महिनाभित्र मुलुकले नयाँ सरकार पाइसक्नेछ । यदि सो सरकार पाँच वर्ष टिकाउ भएमा यस अवधिमा मुलुकमा रेलदेखि खानेपानी, विमानस्थल, फास्टट्रयाक सबै निर्माण भइसक्नेछन् । किनभने ती आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री करिब करिब निश्चित जस्तै छ ।
कांग्रेसकै नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जलस्रोतमन्त्री हुदा आफ्नै जोडबलमा सुरु गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा पनि मुलुकले करिब आधा खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अब एक डेढ वर्षभित्रै यो आयोजनाले प्रतिफल दिन थाल्नेछ । तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुलीको महसुल मात्रै वार्षिक १०–१५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन थाल्ने अवस्था बनिसकेको छ । तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुना साथ वर्षायाममा खाना पकाउने एलपी ग्याँस आयात गर्नुपर्ने छैन । ऊर्जाको क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ जानेछ ।
अबको दुई वर्षभित्र भेरी बबई ड्राइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजना, रानीजमारा सिँचाइ आयोजनालगायत आधा दर्जन सिँचाइ आयोजनाको काम सम्पन्न हुँदैछ । यी आयोजना सम्पन्न हुनासाथ करिब पाँच लाख हेक्टर जमिनमा १२ रै महिना सिँचाइको सुविधा उपलव्ध हुनेछ । थप पाँच लाख हेक्टर जमिनमा १२ रै महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध हुनु भनेको मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुनु हो ।
यसैगरी, अबको एक वर्षभित्र महोत्तरीको बर्दिबाससम्म रक्सौलको जस्तै ठूलो रेल आइपुग्नेछ । कोलकात्ता बन्दरगाहबाट रक्सौलभन्दा बर्दिवास तीन सय किलोमिटर छोटो छ । अबको दुई वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी लोकमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ । यसैगरी, उत्तर दक्षिण नदीको कोरिडोर सडकहरू धेरैजसो सम्पन्न भइसक्नेछन् । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइसक्नेछ । चीनको केरुङसम्म रेल मार्ग निर्माण भइसक्नेछ भने केरुङ–काठमाडौं चार लेनको सडक निर्माणले गति लियो भने यो पनि सम्पन्न भइसक्नेछ ।
माघ महिनाको पहिलो दिन आज ! कुन राशिको भाग्य कस्तो छ ? कुन-कुन राशिलाई आजको दिन शुभ रहला ? हेर्नुहोस् !